Faits-Divers – Page 1118 – Midi Madagasikara
Andrainarivo : Baomba tsy tena izy nampisahotaka ny mponina
Redaction Midi Madagasikara 4 avril 2014
Tsy lavitra ny toerana nahitana fatim-behivavy sy tovolahy voatsatoka antsy, poketra noheverina fa baomba Nisahotaka ny mponina teny amin’ny manodidina an’Andrainarivo, omaly tolakandro. Fotony, nisy olona nahita poketra iray miloko mainty nisy nanary teny amin’ny sisin-dalana. Ka izay nahita dia nihevitra fa misy antony izany ary nandika ilay zavatra avy hatrany fa baomba io. Nisavoritaka…
Toamasina : Nangalatra môtô, notapahina ny tanany
Tsiravina izay nahita. Nijininika eran’ny làlana ny rà na dia nezahin’ilay mpangalatra nofatorana tamin’ny ravin-kazo aza ny tànany. Tsy lasa lavitra fa tokony ho teo amin’ny 600 metatra teo dia nidona tamin’ny “taxi-phone” izy ary nitsirara tamin’ny tany. Mbola mivandravandra be ary nisy aina kely. Omaly, tokony ho tamin’ny valo ora maraina, no nitrangan’izany teo…
Mandoto : Efa amperinasa ny « hélicoptère » mpamono valala
Redaction Midi Madagasikara 3 avril 2014 C.N.A, FAO, hélicoptère, Mandoto, Menabe, Miandrivazo, valala
Herinandro izay no nahatongavan’ny andiam-balala tao amin’ny distrikan’i Mandoto. Marihana fa valala avy ao Miandrivazo, faritra Menabe, ireo. Tsy mbola nisy fiantraikany tamin’ny volin’ny tantsaha aloha hatreto ny fisian’ireo andiam-balala ireo, ary tsy mbola naharay fitarainana ny lehiben’ny distrika raha ny resaka nifanaovana taminy. Toerana dimy ao Mandoto no ipetrahan’ireo andiam-balala ka faritra iray no…
Ambatobe : M.D ilay mpamily nahafaty tovovavy
Redaction Midi Madagasikara 3 avril 2014 Ambatobe, Ankorondrano, Karana, La Réunion, M.D Antanimora
Omaly no naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora ilay teratany karàna nahafaty olona tetsy Ambatobe, ny asabotsy lasa teo. Nofaohiny vao maraina tamin’ny fiara nentiny ilay tovovavy ary maty tsy tsa-drano. Nijanona teo amin’ny “vitesse” fahefatra ny fiara. Raha ny vaovao azo dia miasa eo anivon’ny orinasa iray etsy Ankorondrano izy. Nandeha be ny feo fa…
Maison centrale d’Antanimora : Affrontement évité entre agents pénitentiaires et policiers
Redaction Midi Madagasikara 3 avril 2014 67 HA, Brigade Criminelle, CST, inspecteur Bryan, justice, Maison centrale Antanimora, MOP, parquet, policiers, taxi
Des éléments d’élite de la police nationale étaient venus en renfort pour dissuader les gardes pénitentiaires à exécuter une décision judiciaire. Le placement sous mandat de dépôt est un travail de tous les jours tant pour la justice que pour les policiers. Mais lorsque ce sont des agents pénitenciers qui subissent ce sort, l’affaire est…
Redaction Midi Madagasikara 3 avril 2014 Ambohimanarina, Betongolo, DDT, hopitaly, Itaosy
# Betongolo. Zaza nilalao maty nianjera. Omaly dia zazalahy kely iray, 5 taona, nilalao teo an-tokotany, teny Betongolo, no fantatra fa namoy ny ainy vokatry ny fianjerany. Ny vaovao no nahalalana fa raha variana nilalao tamin’ny toerana kisilasila ity zaza ity dia nibolisatra ary nikodia. Mahatratra 2 metatra ny toerana nianjerany. Nidona tamina andrintany ny…
Betioky Atsimo : Ady sipa, eni-mianaka maty natao vono moka
Redaction Midi Madagasikara 3 avril 2014 Betioky Atsimo, maty, Tongobory, zandary
Ny alarobia lasa teo, tany Vatolatsaka, distrikan’i Betioky Atsimo, dia dimy mianaka ao amin’ny fianakaviana iray no maty notifirina tsy nananana antra tamin’ny fomba feno habibiana, noho ny resaka ady sipa nitarika lonilonim-pihavanana taty afara. Tovolahy iray 22 taona no notifirin’ny dadatoany, ka maty tsy tra-drano, telo volana lasa izay. Nofonosin’ilay dadataoany lay ny fatiny…
← Previous 1 … 1 117 1 118 1 119 … 1 200 Next →